RBZ To Initially Print $400 Million - Techunzipped NewsNews - Techunzipped news offers the latest Zimbabwe Technology news, Daily Technology News in Zimbabwe, news online, South Africa Technology News, technology news as well as international breaking news
RBZ governor John Mangudya said on Monday that they will initially print 400 million Zimbabwe dollars, which will be gradually introduced in circulation to fill gap left by end of dollarization.
Zimbabwe abandoned the Zimbabwe dollars in 2009 after one of the most extreme episodes of hyperinflation in history, adopting the US dollar in its place.
The new currency will now be the sole legal tender in the country. Under the new law, the RTGS dollar is at par with the Zimbabwe unit.
In June the inflation figure eclipsed 100% to confirm the re-admission of the local economy into the recession mode for the first time since 2008. The International Monitory Fund (IMF) predicted that Zimbabwe’s economy will contract by 5.2% before revising the figure to 2.1% in line with the deliverables in the Staff Monitoring Programme (SMP). The World Bank points that the Zimbabwean economy is now in recession and will shrink by 3.1% in 2019.
Related Topics:featured, RBZ, RTGS, USD, zimbabwe